tag ကို: chantelle flannery | Martech Zone
tag: chantelle flannery
Search for Optimized Blog တစ်ခုဖန်တီးရန် ၉ ဆင့်ပါလမ်းညွှန်
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 13, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ခန့်က Corporate Blogging For Dummies ကိုရေးသားခဲ့သော်လည်းသင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့မှတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏မဟာဗျူဟာတွင်အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သုတေသနပြုချက်အရဘလော့ပို့စ် ၂၄ ခုထက်ပိုသောသင်တစ်ချိန်ကဘလော့ဂ်အသွားအလာထုတ်လုပ်မှုသည် ၃၀% အထိတိုးလာသည်။ Create Bridge မှဤအချက်အလက်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်အားရှာဖွေခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ငါကတော့ဒီလမ်းညွှန်ကိုပဲရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်တော်တော်တော်တယ်။
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 21, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ယခုအပတ်တော်တော်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Blog Indiana ရှိ Wiley မှစိတ်ကူးယဉ်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးတရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းစာအုပ်ကို Chantelle နှင့်ကျွန်ုပ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ရှေးရှေးစာအုပ်တွေကောက်ယူနေတာကိုကြည့်ရတာအရမ်းမြန်လိုက်တာ! နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ကိုထောက်ခံအားပေးမှု၊ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြသူတွေအများကြီးနဲ့အတူအောင်ပွဲခံတဲ့နေ့ကိုကုန်လွန်ခဲ့ရတယ် - စာရင်းပြုစုဖို့များလွန်းတယ်! ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ် ထိုအခါ - ငါလက်ခံရရှိသည့်အခါပင်နေ့ကပိုကောင်းတယ်
Dummies အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ blogging သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 8, 2010 တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 22, 2014 Douglas Karr
ကျနော်တို့ကပိုစိတ်လှုပ်ရှားမဖြစ်နိုင်! ယခုတပတ်တွင် Dummies အတွက်ပထမဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ ငါသေတ္တာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရှေ့အဖုံးပေါ်မှာငါတို့အမည်များကိုပုံနှိပ်ခြင်း၌မြင်သောအခါဂုဏ်ယူ၏ခံစားချက်ကိုသင်ပြောပြလို့မရပါဘူး။ Dummies အတွက် Corporate Blogging သည်စာမျက်နှာ ၄၀၀ ကျော်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်သတင်းအချက်အလက်များစွာရှိသည်။ ဈေးကွက်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်စာအုပ်ရေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒအတွက်ကျောက်တုံးတစ်တုံးမျှမကျန်ရစ်ခဲ့ပါ။ The
Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ရေးခြင်း - Chantelle Flannery နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 7, 2010 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 23, 2015 Douglas Karr
ဤသည်မှာ Chantelle Flannery နှင့်အတူဒုတိယဗီဒီယိုဖြစ်ပြီး Dummies အတွက် Corporate Blogging ကိုထုတ်ဝေရန်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏စာရေးဆရာဗီဒီယိုများဖြစ်သည်။ ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာပထမဆုံးဗီဒီယိုကိုငါတို့ထုတ်ဝေခဲ့တယ် Douglas Karr။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုများ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့် Corporate Blogging Tips site တွင်၎င်းတို့ပါဝင်ခြင်း - စာအုပ်ကို Dummies အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်ထုတ်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ တွစ်တာနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ဆိုက်နှင့်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များကိုမြှင့်တင်ပါ။ Chantelle နဲ့ကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီတွေကိုစကားပြော၊ ပညာပေးမယ်